Afaka misotro toaka ve ianao na misotro fanafody rehefa mampinono? - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Community, Company Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Pets Wellness Orinasa News Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanatanjahan-Tena Mavesatra Ny Fizahana
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Inona no tena mahatonga azy ho rononon-dreny?
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra fampinonoana ho fanohanana ny Volana fampinonoana nateraky ny volana aogositra (Aogositra). Tadiavo ny fandrakofana feno Eto .
Fantatry ny reny mpitsabo mpanampy fa ny zavatra rehetra apetrakao ao amin'ny vatanao dia mety hisy fiantraikany amin'ny zanakao amin'ny alàlan'ny rononon-dreninao. Miezaka ianao mba hahazo sakafo mahavelona sy hydration tsara hamahanana ny kely indrindra hohaninao.
Fa ahoana kosa ny amin'ireo zavatra tsy sakafo laninao? Manokana, fanafody fanafody sy alikaola. Afa-doza ve izy ireo alain'ny reny mitaiza? Firy amin'ireo akora ireo no miditra amin'ny rononoo? Nizaha manam-pahaizana manokana izahay raha te hahalala.
Fanafody fanafody rehefa mampinono
Azo antoka ve ny mandray fanafody fanafody rehefa mampinono ? Ny valiny tsotra dia mazàna. Araka ny a tatitra momba ny klinika nataon'ny American Academy of Pediatrics , ny ankamaroan'ny fanafody sy ny fanefitra dia azo antoka ampiasaina mandritra ny fampinonoana ary tsy hanimba ny zanakao.
Ny ankamaroan'ny fanafody mahazatra dia azo antoka ho an'ny zazakely salama [rehefa nalain'ny reny mampinono], hoy i Rachael Martin, mpitsabo mpanampy voasoratra anarana ao Bowie, Maryland. Notohizany fa maro ny dokotera, dokoteran-jaza ary mpivarotra fanafody no tsy ampy ny mombamomba ny fanafody sy ny fampinonoana, noho izany dia tsara kokoa ny miresaka amin'ny mpanolo-tsaina lactation na mpanabe izay manam-pahaizana manokana amin'izany.
Ary, mazava ho azy, tsy ny fanafody rehetra no foronina mitovy.
Ny fanafody dia miovaova arakaraka ny karazana zava-mahadomelina sy ny makiazy simika ao aminy, hoy i Kelly Kendall, mpitsabo mpanampy voasoratra anarana ary mpanolo-tsaina mpampinono ao Crofton, Maryland.
Midika izany fa tsy maintsy mandanjalanja ny tombony sy ny loza ateraky ny fanafody tsirairay ny mpitsabo anao alohan'ny hanomezana azy ireo amin'ny reny mampinono. Araka ny tatitry ny AAP, misy lafin-javatra tokony hodinihina:
filan'ny reniny fanafody.
ny vokatry ny zava-mahadomelina amin'ny famokarana ronono.
firy ny famahanana rononon-dreny omen'ny zaza isan'andro.
ny habetsaky ny zava-mahadomelina mivoaka amin'ny rononon-dreny.
ny habetsaky ny fitrohana am-bava ny zaza minono.
misy fiatraikany ratsy amin'ny zaza minono.
Andao hojerentsika akaiky ireo teboka telo bala farany. Ahoana no ahafantaranao fa ohatrinona ny fanafody avoaka ao anaty rononon-dreny, ary avy eo entin'ny zaza? Ary ny tena zava-dehibe, ahoana no hahafantaranao raha mety hanimba ny zanakao ny fanafody?
Miankina amin'ny fanafody sy ny fomba fanefatra sy fivoahana azy ary koa ny antsasaky ny fiainany, hoy i Martin. Ny fiarovana ny zava-mahadomelina ho an'ny fampinonoana dia nohadihadian'ny Dr. Thomas Hale fatratra.
Bokin'i Dr. Hale, Fanafody sy ronono reny , mpiara-manoratra amin'i Dr. Hilary E. Rowe, Pharm.D., dia ao amin'ny andiany faha-17 ankehitriny. Izy io dia heverina ho loharanon-karena voalohany amin'ny fiarovana ny fanafody mandritra ny fampinonoana.
Ny mpanoratra dia manome sokajy risika fampinono (LRC) amin'ny fanafody isan-karazany amin'ny alàlan'ny antony maromaro. Voalohany, izy ireo no mamaritra ny fanapoizinana an-tsokosoko amin'ny ankapobeny. Ny fanafody sasany dia misy poizina ambany, toy ny penicillins, sulfas, ary NSAID (toy ny ibuprofen). Fa ny hafa kosa misy poizina be, toy ny rongony homamiadana sy antimetabolite. Matetika, tsy misy fanadihadiana voafehy azo omena ny angon-dronono momba ny zava-mahadomelina. Amin'ity tranga ity, ny mpanoratra dia miankina amin'ny fivarotam-panafody, izay misy ny fitrohana am-bava, ny haavon'ny plasma ary ny antsasaky ny fiainana. Amin'ny fampiasana an'ity fampahalalana ity, ny mpanoratra dia manombatombana amin'ny LRC.
Tsy ho vitantsika ny handrava ireo anton-javatra rehetra ireo amin'ny fanafody azo atao amin'ny fanafody ao amin'ny lahatsoratra bilaogy tokana. Na izany aza, afaka mahita fampahalalana momba ny fanafody manokana ianao ao amin'ny Ivotoerana mampidi-doza an-jaza , tetik'asa iray hafa an'ny Dr. Hale's. Ny foibe dia manome laharana iray azonao iantsoana ny fanontaniana momba ny fiarovana ny fanafody mandritra ny fampinonoana.
Alikaola sy fampinonoana
Rehefa miresaka toaka sy fampinonoana , hafa kely ny valiny. Ny reny dia afaka mankafy misotro amin'ny antonony, hoy i Kendall. Ny fitsipi-pitondrantena tsara dia raha tsy mahay mitondra tena ianao, dia tsara ny mampinono.
Manam-pahaizana maro, anisan'izany ny American Academy of Pediatrics ary ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina , mamporisika ny reny mitaiza be ronono tsy hihinana zava-pisotro misy alikaola iray na roa isan-kerinandro (ary lazain'izy ireo fa ny tsy fisotroana mihitsy no azo antoka indrindra). Ny mpitsabo mpanampy dia tokony hitranga adiny roa na mihoatra aorian'ny fisotroan-toaka, mba hampihena ny tratran'ny zaza. Saingy mifanohitra ny fikarohana momba an'io lohahevitra io.
Ny alikaola dia mihombo amin'ny rononon-dreny amin'ny taham-pahalalana mitovy amin'ny alàlan'ny rà, hoy i Martin. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha 0,08% ny alikaola alika ao aorian'ny fisotroanao divay telo vera, izay hametraka anao mihoatra ny fetra ara-dalàna amin'ny fitondrana fiara any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, dia alikaola 0,08% koa ny rononon-dreninao.
Ho fampitahana, ny tsirairay amin'ireo vera misy divay ireo dia mety ho alikaola 10-20%. Ka ny ronono sotroin'ny zanakao dia manana alikaola kely noho ny zava-pisotro misy anao. Raha ny marina, araka ny fanadihadiana nataon'ny klinika tao amin'ny gazety Fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana sy toksikolojia , ny habetsaky ny alikaola lanin'ny zazakely mitaiza amin'ny alàlan'ny rononon-dreny dia manodidina ny 5-6% amin'ny vola sotroin'ny reniny. Na dia amin'ny tranga teôria aza amin'ny fisotroana tafahoatra, ny ankizy dia tsy hiharan'ny alikaola mifandraika amin'ny klinika, hoy ny fanadihadiana. Ny zaza vao teraka dia mihinana alikaola amin'ny antsasaky ny tahan'ny olon-dehibe.
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro nandritra ny taona maro, tsy ilaina ny mipaompy sy manary. Toy ny alikaola miditra ao amin'ny nononao, dia mandalo koa izy avy mitovy amin'ny taham-pahaivanao amin'ny ranao. Rehefa midina ny tahan'ny alikaola ao anaty ra, dia toy izany koa ny alikaola ao anaty ronono. Raha mieritreritra ianao fa nisotro zava-pisotro be loatra mba hikarakarana ny zaza, dia miandrasa kely fotsiny (matetika dia roa na telo ora no tokony ho ampy) rehefa milomano ianao. Ary aza ariana io volamena ranona io!
Raha manana fanontaniana momba ny fiarovana ny alikaola na fanafody preskripsi ianao rehefa mampinono, dia miresaha amin'ny mpanolotsaina fampinono, ny OB-GYN anao, na ny dokoteran-jaza zanakao
vitamina d 50000 iu mihoatra ny kaontera
inona no tombony azo amin'ny fisotroana vinaingitra isan'andro
azonao atao ve ny mahazo vahaolana avo inhalation sulfate albuterol
mampidina kolesterola ldl ambany ny vinaingitra paoma
inona ny anarana mahazatra an'ny coreg
inona ny fanafody fanaintainana azon'ny vehivavy bevohoka?
ohatrinona ny iray doka ibuprofen